विजय कुमार शनिवार, माघ २७, २०७४ 15009 पटक पढिएको
‘डा. रुइत कति सरल मानिस हुनुहुन्छ है मार्टिन ?'
‘तिम्रो कुरामा सही थप्न पनि सकिन्छ, नथप्न पनि सकिन्छ। रुइतको सरलता उसले बिताएको जीवनको जटिलता, दुःख, मिहिनेत र करुणाको परिणाम पनि हो। विजय के तिमीलाई थाहा छ, उसको बाल्यकाल कस्तो थियो ? आज ऊ जुन शिखरमा छ, त्यहाँसम्म पुग्न उसले कति उकालो उक्लिनु पर्‍यो ? नेपालमा केही हुँदैन, गर्न सकिन्न भन्नेहरू धेरै छन्। यस्तो ठाउँमा पनि उसले यति ठूला उपलब्धिहरू कसरी हासिल गर्‍यो ? कुनै दिन लेख्यौं वा टेलिभिजन गर्यौं भने एउटा यस्तो रेखाचित्र तयार गर्ने कोसिस गर्नू, जसले गर्दा सबैले डा. सन्दुक रुइतलाई अलि सजिलोसँग बुझून्। मानिसको रूपमा र डाक्टरको रूपमा र तिलगंगा आँखा अस्पतालजस्तो संस्थाको संस्थापकको रूपमा पनि ...’
केही समय नेपाल आँखा अस्पतालमा काम गरेपछि, तपाईं त्यहाँको सुरक्षित वातावरण छाडेर निस्कनुभयो। तपाईंको त्यो निर्णयले कालान्तरमा तिलगंगा आँखा अस्पतालजस्तो विख्यात संस्था स्थापनाको जग बसाल्यो। यदि तपाईं पुरानै संस्थामा बसिरहेको भए ...?
मैले के ठानें भने, तो प्रविधिको परिणाम र प्रभाव विशाल परिधिमा फैलनेछ। यसले लाखौं मानिसको जीवनमा ज्योति ल्याउन सघाउनेछ। जनस्वास्थको क्षेत्रका यो ठूलो फड्को हुनेछ भन्ने लाग्यो। त्यसैलाई प्रेरणा भनौं या जोखिमको स्रोत भनौं ...
अरूका बारे मैले बोल्नु उचित हुँदैन। आफ्नो भन्छु। मेरो घाँटीमा एउटा पीडादायक गाँठो अड्किएको थियो। पुरानो प्रविधिअनुसार मोतिबिन्दुको उपचार गर्न समय धेरै लाग्थ्यो। गाउँघरका गरिबका निम्ति उपचार समयको अवधि र तत्कालीन उपचार पद्धति धेरै लामो थियो। म आफैं पहाडको गरिब परिवारबाट आएकाले पीडा बुझ्न सक्थें। विकट गाउँमा आँखाको महŒव सायद झनै बढी हुन्छ। एक कदम तलमाथिले मान्छे भीरबाट लड्न सक्छ। म रातदिन सोचिरहन्थें– अहिले चलेको भन्दा राम्रो, छिटो र सस्तो तरिकाले मोतिबिन्दु रोगको उपचार हुने कुनै पद्धति छ कि ...
कक्षा ७ मा फाइनलको जाँच सकियो। सबै साथी घर गए, मबाहेक। अघिल्लो वर्ष पनि त्यस्तै भएको थियो। बिदाको बेला म स्कुलको झ्यालहरू पुछ्ने काम गर्थें। त्यसदिन पनि त्यही गर्दै थिएँ। मलाई लिन कोही आउँदैनन् भन्ने थाहा थियो। अचानक खबर आयो– ‘स्कुल अफिसमा आउनु’। म अफिस पुगें। खुसीले आफूलाई सम्हाल्न सकिनँ। मेरो बुबा मेरै अगाडि खडा थिए। मलाई लिन आएका रहेछन् ...बिर्सनै नसकिने सरप्राइज।
म बहिनीसँग धेरै नजिक थिएँ। उनको नाम याङ्ला थियो। महेन्द्र भवनमा पढ्थिन्। हामी सँगै डेरामा बस्थ्यौं।। एक्कासि उनी दुब्लाउन थालिनँ। उनलाई टीबी भएको रहेछ। त्यसबखत नेपालमा टीबी धेरै ठूलो रोग मानिन्थ्यो। याङ्ला धेरै कमजोर भएपछि उनलाई बाआमाले लिएर गए। धनकुटाको हिलेमा। त्यसबखतसम्म उहाँहरू ओलाङचुङगोलाबाट हिले बसाइँ सरिसक्नुभएको थियो। जब उनी हामीलाई छाडेर जाँदै थिइन्, त्यसबखत उनको मुहार म बिर्सन सक्दिनँ। याङ्ला बितेको एक महिनासम्म मलाई होसै भएन। मैले आफूलाई सम्हाल्न निकै कोसिस गर्नुपर्‍यो। त्यसपछि मलाई लाग्यो– म डाक्टर बन्नुपर्छ। तर, लाग्दैमा कहाँ हुन्छ र ? त्यसबेला ओलाङचुङगोलाको एक गरिब केटाका निम्ति डाक्टर बन्नु सजिलो कहाँ थियो र ? तैपनि मैले हिम्मत हारिनँ। खुब मिहिनेत गरेर पढें। यसरी सोच्ने हो भने, मेरो प्रेरणाको स्रोत याङ्ला हो, जो हाम्रै आँखाअघि अल्पायुमै संसारबाट गइन् ...
जागिर त हुँदै होइन। मलाई आफूले गरिरहेको कामबाहेक अरू कुनै काम गर्न सक्छु भन्ने रत्तिभर विश्वास छैन। बुझ्नु भएन ? प्रेमभन्दा पनि माथि कुनै शब्द छ भने त्यही शब्दले मात्र आफ्नो कामसँगको मेरो सम्बन्ध परिभाषित गर्न सक्छ। नियति पनि होला सायद...। मैले आफ्ना बिरामीसँग बिताएको समय, सर्जरीमा बिताएको समय, अस्पतालहरू निर्माण गर्न लगाएको समय...। म धेरै भाग्यशाली छुजस्तो लाग्छ। मलाई लाग्छ– मैले आफ्नो समय खेर फाल्नै हुँदैन।
(ठूलो लामो हासो...) खोइ कति भनौं ! कहिलेकाहीँ सोच्छु, म आँखाको कामबाहेक के पो गर्न सक्छु र ? त्यो कामबाहेक म बेकारको मान्छे हुँ ! गुड फर नथिङ। जीवनमा अघि बढ्ने हो भने, मानिसले आफ्ना सीमितता पनि बुझ्नुपर्छ। मेरो कामको परिधि आँखामा सीमित छ। मैले जति आँखाहरूलाई जीवन दिँदै जान्छु, ती आँखाले मलाई त्योभन्दा धेरै दिएर जान्छन्।
तीनकुने पुलमा बम आतंक (फोटोफिचर) 2761
दीपक मनाङेको नागरिकताबारे छानबिन सुरु 5155
पाँचथरमा एक हजार च्याब्रुङ प्रदर्शन (फोटोफिचर) 132
खेल उद्घाटन गर्ने क्रममा लडेर मेयरको हात भाँचियो 664
प्रधानन्यायाधीशको विरोध गर्ने रञ्जु दर्शनासहित एक दर्जन पक्राउ 555
प्रदेश-२ का मुख्य न्यायधीवक्ता विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट 987